Cishe iminyaka eyi-11 iMac mini | Ngivela kwa-mac
Cishe iminyaka eyi-11 yeMac mini yiminyaka eminingi
UJordi Gimenez | | Mac Mini, Amakhompyutha we-Mac
Ngo-2015 bekuyiminyaka eyi-10 kusukela i-Apple yethula iMac mini yokuqala futhi sifinyelela eminyakeni eyi-11 yokuphila ezoqedwa ngoJanuwari 2016. Inkampani ene-apula elilumayo yenza ushintsho endleleni yayo yokuthengisa ku-Mac ngenkathi yethula ngoJanuwari 2005 iMac mini yakhe yokuqala.
Lawa ma-Mac amasha awangezanga ngaphezu kwebhokisi eline-hardware, ikhebula lokuxhuma kwamanje, incwajana yesiqinisekiso kanye ne-CD yokufaka ye-OS X. Konke lokhu konga imali kubasebenzisi abafuna ukuqaqa kusuka kuWindows kuya ku-OS. X, ngoba ungasebenzisa ithuba lokuqapha, ikhibhodi negundane umthengi ayenalo.
Esizokwenza ukufingqa okuncane kwezinguquko nemininingwane evelele yalokhu cishe iminyaka eyi-11 yeMac mini.
Imodeli iMac mini A1103 bekungama-Mac Minis okuqala ukungena ezitolo nasezitolo.Intengo yakho yahlukahluka ngamadola ayi-100 phakathi kwemodeli enamandla kakhulu kanye namandla amancane. Amandla anamandla amancane ayene-hard drive engu-40GB kanye ne-processor engu-7447 GHz PowerPC 4A (G1,25), ayebiza u- $ 499 kanti imodeli ephezulu yayingu- $ 599 futhi ineprosesa efanayo kodwa i-1.42 GHz Combo ne-80 GB yediski eqinile. Kuwo womabili amamodeli i I-RAM yayingu-256 MB iyanwebeka ifike ku-1GB (inesikhala sememori esisodwa kuphela) futhi i-Apple ayinconyanga ukuyikhulisa yize ingalahlekelwanga iwaranti yokwenza lokho.
Ngawo lowo nyaka wokwethulwa kwayo futhi phakathi nenyanga kaSepthemba 2005, i-Apple ivuselele iMac mini engeza kwi-compact Mac desktop I-512 MB ye-RAM. Ngakho-ke bekuhlekisa kakhulu kubathengi, kepha bekunjalo.
Ngenyanga ka Februwari 2006 I-Apple yethula uhlobo lwayo lwesibili lwe-Mac mini ngeprosesa engcono futhi ine-512 MB efanayo ye-RAM kepha kulokhu inwebeka ize ifike ku-2 GB futhi ngamanani amasha: $ 599 ye-1.5 GHz kanye ne- $ 799 enhle ye-1.66 GHz. Nakulokhu i-apple yenze umsebenzi ofanayo futhi yethula imodeli entsha ngehardware yangaphakathi engcono phakathi noSepthemba wangonyaka ofanayo kodwa wagcina amanani.
KwiMac mini elandelayo (maphakathi no-2007) i-Apple ithatha isikhashana ukuyivula futhi iyabona ukuthi akukuhle ukwethula amamodeli amabili anoshintsho oluncane kwihardware yangaphakathi kanye namanani ahlukile kusukela ngaphezu kokusiza, alimaza umsebenzisi owaziyo « umdlalo »ulinde ukuthengwa kwenguqulo yesibili yonyaka. Kulokhu, i-Apple ayigcini ngokwethula imodeli ekuqaleni konyaka - yethulwa ngo-Agasti 2007 - kodwa futhi kubonakala ngathi iyakhohlwa ngakho futhi ayiyibuyekezi kuze kube ngu-2009. Ngalesi sikhathi amanani abanjwe ku- $ 599 wemodeli nge-2 GHz Core 1.83 Duo entsha nase- $ 799 yemodeli ye-2.0 GHz. Ngaphezu kwalokho, i-RAM inyuke yaya ku-1 GB kuzona zombili izimo. Le modeli isivele ikumamodeli anqanyuliwe yi-Apple, kufayela le- okuthiwa i-vintage.
Ifike ngenyanga ka Mashi 2009 I-Apple ibuyile yabheka iMac encane engeza ukuthuthuka kokuxhuma kwangemuva okufanayo futhi yandisa amandla wehadiwe yangaphakathi. Ngalesi sikhathi i-Apple ishiye iMac mini ngentengo efanayo ama-dollar angama-599 wemodeli ye- I-1 GB ye-RAM, I-hard disk engu-120 GB ne-128 MB VRAM. Ngemodeli engu- $ 799 iMac mini ingeziwe I-2 GB ye-RAM, I-hard disk engu-320 GB kanye no-256 MB we-VRAM.
Ngawo lowo nyaka u-2009 abafana baseCupertino baqala ezinye izinhlobo ezimbili ezithuthukisiwe. Kulokhu bafika ngo-Okthoba futhi I-Apple ibonakale ibuyela ezindleleni zayo zakudala ngokuguqula iMac ngaphambi kokuphela konyaka, lawa ma-Mac minis abiza ama- $ 599 afanayo no- $ 799. Endabeni ye-Apple eshibhe, ifake i-2.26 GHz core core, ene-2 ​​GB ye-RAM, ne-160 GB yediski eqinile, futhi ngemodeli ebiza kakhulu iprosesa ifinyelele ku-2.53 GHz, nge-4 GB ye-RAM kanye no-320 GB we i-hard disk. Namuhla I-Apple iyaqhubeka nokusekela nezingxenye kubasebenzisi abanale Mac mini.
Unyaka wezinguquko futhi i-Apple yakha kabusha iMac mini ngokuya ngezingxenye ezintsha zangaphakathi zezingxenyekazi zekhompiyutha futhi inikeza ukubukeka okukude kakhulu kunalokho eyayiyikho. Faka i-aluminium kugobolondo elingaphandle njengakuma-MacBooks futhi igibela ngaphakathi kwe-2.4 GHz Dual-core, 2 GB ye-RAM ne-320 GB yediski eqinile ye $ 699. Le Mac mini izoba ngeyokugcina ukwengeza isifundi se-DVD kanye nalezo ezingavumeli neze ukulungiswa kwangaphakathi kwehardware.
NgoJuni wangonyaka ofanayo i-Apple ingeze iMac mini Server. Lokhu akusasengezi isidlali seDVD futhi inani lentengo lifinyelela kumadola ayi-999 ngokucushwa kwangaphakathi kwe-2.66 GHz processor eyi-core core, i-4 GB yememori ye-RAM kanye nama-hard drive angama-500 GB.
Phakathi nale minyaka i-Apple ayizange iguqule intengo ye-Mac mini kepha ingeze ukuthuthuka kuyo. Futhi ngonyaka owedlule i-Apple ingeze imodeli ye-Mac mini enezici ezimbalwa ngokuya ngehardware yangaphakathi kepha eshibhile kakhulu, lokhu kubiza u- $ 499 futhi kuyimodeli yokungena ye-Mac mini yamanje. Abasebenzisi abaningi basibuza ukuthi ukuthengwa kwale modeli yezomnotho kuyathakazelisa yini futhi yize kuyiqiniso ukuthi intengo iyakhanga futhi ingaba wusizo ngempela emkhakheni wabasebenzisi abathile, inketho elandelayo etholakalayo ye $ 699 ibonakala inketho engcono kakhulu.
Kulo nyaka kubonakala sengathi i-Apple izovumela ushintsho noma ukuvuselelwa kwemodeli yamanje kungadluli nakuprosesa, ngakho-ke akubonakali ngathi sizobona okusha kulo nyaka kwi-Mac mini esondele ekufinyeleleni iminyaka engu-16 kumkhiqizo. ikhathalogi evela ku-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » Cishe iminyaka eyi-11 yeMac mini yiminyaka eminingi
Endleleni eya eminyakeni eyi-16 yeMac Mini?. Yebo, kunjalo ... Ngokuhamba kwesikhathi, nakanjani.
Ngo-2000 wayengekho lapho futhi engalindelekile ...
Ukuze iMac Mini ibe neminyaka engu-16 ubudala, kuzofanele silinde kuze kube nguJanuwari 2021
Vele u-Alberto, kukhombisa ukuthi ufunda isihloko naso sonke isihloko.
Kulungiswe okungalungile nokubonga ngokusazisa
Ayikho inkinga. 😉
Ngiwumfundi ophoqelelayo, ngifunda yonke into. Ngisho nezitembu zokuposa 🙂
Idokhu esemthethweni ye-Apple Watch ine-Qi 1.1.2 ejwayelekile